HESHIISKA SHARCIYEED & GDPR COMPLIANCE - shoppingdirect24.com - SD24
Home > MAGAALADA HORUMARKA & GDPR U QAABILSAN
shoppingdirect24.com - Siyaasadda Khaaska ah ee SD24
- Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan u hoggaansameyno dhammaan qodobada ku habboon
Nidaamka Badbaadinta Macluumaadka Guud (GDPR)
Tixraac halkan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan GDPR:
- Ma isticmaalno xogtaada wixii aan ahayn daruuri si laguu qabanayo ganacsigaaga
iyo si aad u hagaajisid boggayaga waayo aragnimadaada ugu fiican.
- Ma iibino macluumaadkaaga.
- Macluumaadkaaga uma isticmaali karno suuq-geynta ama dalacsiinta annaga oo aan haysan ogolaansho cad.
- Waxaanu dukaankeenna u qaabeynay:
" Ha la soconin cinwaanada IP buuxa oo aqoonsi dhammaan cinwaanka IP ee nidaamka.
Sababtoo ah cilaaqaad GDPR, cinwaanka IP-ga ayaa loo hirgeliyey dhammaan dadka isticmaala. "
- Waxaan u adeegsanaa barnaamijyada tirakoobka iyo qalabka si aan u falanqeyno taraafikada booqdayaasha dukaanka kaliya ee ku qoran foomamka la isku daro. Gaar ahaan xusuusnow inaanu soo aruurin ama aan helno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, sida magaca, cinwaanka, lambarka taleefanka ama emailka, oo aan ahayn kan ku siinaya sheyga alaabta aad iibsaneyso. Uma adeegno macluumaadka shakhsi ahaaneed ee loogu talagalay ujeedo kasta.
- Qeybta saddexaad ee la geliyo ama gudbinta macluumaadkaaga waxaa kaliya oo la sameeyaa ama la siiyaa oo keliya marka loo eego baahida loo qabo (tusaale ahaan alaab-qeybiyeyaal / shixnado iyo lacag-bixiyeyaasha bixinta) oo kaliya oo si toos ah uula dhaqmeysa ganacsigaaga, fadlan ka eeg faahfaahinta hoose.
Nidaamkan Qarsoodiga ah wuxuu sharxayaa sida macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed loo ururiyey, loo isticmaalay, loona wadaagay markii aad soo booqatay ama aad ka iibsanayso shoppingdirect24.com ("Site").
Markaad booqato bogga, waxaan si toos ah u soo aruurineynaa macluumaadka ku saabsan qalabkaaga, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan barta internetka, cinwaanka IP, goobta waqtiga, goobta juqraafiyeed iyo qaar ka mid ah cookies oo lagu rakibay qalabkaaga. Intaa waxaa dheer, marka aad eegto bogga, waxaanu ururinaa macluumaadka ku saabsan boggaga internetka ama alaabooyinka aad u aragtid, boggaga internetka ama shuruudaha raadinta kuu soo gudbiyay Bogga, iyo macluumaadka ku saabsan sida aad ula macaamilayso Bogga. Waxaan tixraacaynaa macluumaadkan si toos ah loo ururiyay "Macluumaadka Aaladda".
- "Geli faylasha" ficilada dabagalka ah ee ku yaala Bogga, oo ururi xogta oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP, goobta juqraafiga, nooca browser, bixiyaha adeegga internetka, bogagga tixraaca / ka bixitaanka, iyo taariikhda / saacadaha.
Sida kor lagu sharaxay, waxaan u isticmaali karnaa Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed si aan kuugu siino xayaysiisyo bartilmaameed ama isgaarsiinta suuqyada aan rumaysnahay inay tahay mid xiiso leh. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida xayeysiisku ujeeddadu tahay, waxaad booqan kartaa bogga waxbarashada ee NAI "http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Waxaan u qaabeynay qalabka ururinta xogta iyo barnaamijyada si loo ixtiraamo raadinta codsiyada, illaa inta doorashadan la heli karo.
Adigoo isticmaalaya boggayaga internetka, adiga (booqde) ayaa sii raaca aqbalaya inaad ogolaato inaad ku ogolaato cid saddexaad in ay ka baaraandegaan cinwaankaaga IP, si loo go'aamiyo goobtaada ujeedka ujeedada beddelaadda lacagta. Waxa kale oo aad ogolaatay in aad haysatid xawaalad lacag ah oo lagu kaydiyey baqda hawsha ee ku jira barta internetka (cookie ku meel gaar ah oo si toos ah looga saarayaa markaad xireyso biraawsarkaaga). Tani waxaan u sameeyneynaa si lacagta loo doorto in la doorto oo si joogta ah markaad eegto boggayaga internetka si qiimaha loo beddeli karo adiga (booqdaha) lacagtaada.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan habdhaqanka asturnaanta, haddii aad qabtid su'aalo kale, ama haddii aad rabto inaad sameyso cabasho, fadlan nagala soo xiriir email ahaan